GALIILYO WAA MAANSO IFTIIMINAYSA CAWAAQIB XUMADA HEYB SOOCA ABWAAN C/LAAHI SALEBAN BIDDE | Toggaherer's Weblog
AMIIN MAR 2aad WAKHTIGAYGA QAALIGA AH WAXAAN KUUGU DUUR XULAY INAAN KAA DHAADHICIYO RAYIGA QALAFSAN
QARAXII BALADWEYN DHIMASHADA OO KOR U SII KACAYSA ALSHABAAB OO SHEEGATAY SHARIIFKA OO KA HADLAY
GALIILYO WAA MAANSO IFTIIMINAYSA CAWAAQIB XUMADA HEYB SOOCA ABWAAN C/LAAHI SALEBAN BIDDE
Posted by: toggaherer on: June 19, 2009
Galiilyo: Waa Maanso Iftiimineysa Cawaaqib Xumada Heyb Sooca Iyo Kala Sareynta Ku Dhisan Cadaalad Darada.
“Ma Gunbaa Walaalkaa, Adiguna Gob-baad Tahay”
Abwaan Cabdillaahi Saleebaan Bidde
Waxa muddo aan dheerayn soo booqday magaalada Oslo ee dalka Norway Garaad Axmed Diiriye Jaamac, oo ka mid ah isimada beelaha la hayb sooco. Garaadku wuxu ka soo kicitimay dalka Sweden, waxaanu kulan la qaatay waxgaradka Oslo.
Abwaan Cabdillaahi Saleebaan Bidde wuxu ka mid ahaa dadkii ku sugnaa golaha, golahaa oo uu garaadku kaga sheekanayey dhibaatooyinkii kala gudboonaaday caano shubkii garaadnimadiisa, geedkii lagu caleemo saarayey iyo wacdarihii ka dhacay goobtaa.
Haddaba, kolkii uu Garaad Axmed ka sheekaynayey sheekadaa oo dadkii golaha fadhiyey wada damaqday, ayaa nin dadkii golaha fadhiyey ka mid ahi xaggii abwaanka jaleecay oo yidhi miyaanad eraygii ku haboonaa ka odhanayn.
Abwaanku isaga oo ku halqabsanaya faca soo koroya, ayuu dabeetana curiyey maansadan GALIILYO.
Gabdhayahow ma maqasheen
Sheekada guracan iyo
Taariikhdan guunka ah
Inuu reer goâ€™aansaday
Markay talo gorfeeyeen
Guddi ay u saareen
In garaad la yeeshoo
Gadh-wadeen u talin-kara
Gurdan raaca habaqliâ€™i
Goonyaha ka joogsade
Golii caleemo saarkiyo
Kolkay geedkii keeneen.
Inuu guluf ku soo kacay
Inay beelo guuxeen
In hinaase wada galay
Hoos loo gunuusiyo
Inay gaadhay sheekadu
Miyey nala gudboonyiin
Sinji-guurka lagu falay
Iyagoo gabooye ah
Gob miyey la simanyiin
Gar miyey u leeyiin
Gugbaa laysku soo yidhi
Goolaaftan quudhsi ah
Galabtaa wax may hadhin
Warmaa laysu soo guray
Gaashaanka loo qabay
Guutooyin soo tube
Goobtiina kama noqon
Garnaqsiga la yaabka leh
Waxaa hadal ku soo goâ€™ay
Guracaa ku dhaqantaan
Ajigow ma garatidee
Ha ka tegin garowshaha.
Nin gafuurka taagaba
Geb-gebtii ma soconine
Garabkii Is-bidi jiray
Ka huleele gegidii.
Sacabkii Is-wada gaadh
Hees lagu gardaadshiyo
Durbaan loo garaaciyo
Kuwii guushu raacdaa
Garaadkoodii mood yidhi.
Ma gunbaa walaalkaa
Adiguna gob-baad tahay
Godobtaad ku faantaan
Ma gefeen dadkayguba
Hadday garasho leeyiin.
Inta gabadh darmaaniyo
Kuwaa guudka loo dabay
Ama ugub gashaantiya
Carmal iyo garoob-wacan
Gaari ka xujowdee
Garba duubka ugu xidhan
Dhaqan lagu gabraartiyo
Xeer lagu goblamayiyo
Caadooyin soo gudhay.
Inta inan gabowdee
Guun aad ku caydaan
Geesigay u dhixi layd
Waa gabooye lagu yidhi
Kuma geyo ku diiday.
Maankaanay geli karin
Inta guri ku baaqsaday
Inta calaf la gowracay
Ama gacal kala fogeyseen.
Gadaal aan u noqonee
Gabay bay ku tiriyeen
Xilka guudka loo sudhay
Waa garaad u yaal
Astaan gaar ihiyo
Guul noo horkaca
Waa garaad xoroo
Weligii gun noqon
Waa garaad ku yimi
Guhaad lagu korshay
Waa garaad u yimi
Guâ€™yo soo tirsaday
Soo goâ€™ay shinkii
Wadar iyo guddoon
Ku haboon goâ€™aan.
Gashi raagay iyo
Dulmi laga galiyo
Godob duug ahayd.
Xaqay gees mareen
Inuu golaha tuso.
Goâ€™a inuu ka rogo.
Ay ka gaabsadeen
Inuu soo gundhabo
Gidi soo bandhigo.
Geesigii ka baqay
Inuu soo gunaanado.
Geed kibir ku baxay
Gunta inuu ka jaro.
Inuu geedi raroo
Guri roon ku furo.
Gobanimo u dirir
Gurmad uu u taro
Ciddii lagu gefee
Ku gabood fasheen.
Waxba yaan gudbine
Ha ku noqon gardiid
Ama gaar bulshooy
Gacan qabo dadkoo
U gargaar xaqoo
Godobtii ka maydh.
Gurmad bay u tahay
Samo loo galee
La gorfee wanaag
Oo garab istaag.
Waa guul allee
Gacal kala lumoo
Galad iyo dareen
Gebi qayb sadoo
Ilmo goboâ€™ ka tidhi.
Oo geli ramaas
Gabayaa u sheeg